२०७७ सालका यी ५ भाग्यमानी राशिहरू ! सेयर गरौ «
२०७७ सालका यी ५ भाग्यमानी राशिहरू ! सेयर गरौ
Published : 15 April, 2020 9:48 pm
मेहनत धेरैले गरेका हुन्छन् तर फल भने थोरैले मात्र पाउँछन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सफलताको पछि मानिसको भाग्यको योगदान पनि हुन्छ । त्यसैले धेरैले भाग्यमा पनि विश्वास गर्छन् । राशिको हिसाबले पनि भाग्यमानी र सधैँ सफलता प्राप्त गर्ने मानिस छुट्टाउन सकिन्छ । कुल १२ राशिमध्ये ५ राशिका व्यक्तिलाई उनीहरूको भाग्यले नै भाग्यवान बन्न साथ दिन्छ । निम्न ५ राशिका व्यक्तिलाई यस्ता प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरू बताउँछन् ।
१ वृष- यी राशिहरू हुनेहरुका लागि यो साल निक्कै फलावन रहेको छ । यो समय नयाँ काममा सफलता मिल्ने नयाँ कम गर्ने जोस जागर बढ्ने समय रहेको छ । भाग्य स्थानमा रहेर वृहस्पति गएर बसेको छ । सन्तानबाट पूर्ण साथ सहयोग पाउनेछ । शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रै रहेको छ ।वैदेशिक यात्राको समेत योग रहेको छ । मन निक्कै प्रसन्न रहनुका साथै शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिनेछ ।
२ कर्कट राशि- यी राशि हुनेहरुको लागि दाम्पत्य जीवनमा ठुलो सुख प्राप्त गर्नुका साथी घर परिवारको पूर्ण साथ प्राप्त हुनेछ । प्रेम गर्ने जोडीहरूको लागि यो वर्ष निक्कै उत्तम रहेको छ । त्यस्तै व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्नेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । मनोबल उच्च रहनुको साथै मनमा क्रान्ति छाउने छ ।
सुत्नु अघि शुपतिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस !
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)माया प्रेममा थप प्रगाढता बढेर जानेछ